नेपाली बोराका झोला अमेरिका र जर्मनीमा::KhojOnline.com
बोराको झोला भन्नेबित्तिकै नाक खुम्च्य्याउने वा खिसिट्यिुरी गर्नेहरूलाई ३१ वर्षीया प्रकृति मैनालीको कामले ‘सरप्राइज’ दिन्छ। उनी बोराकै झोला बनाउँछिन्, आकर्षक र ‘फेन्सी डिजाइन’मा।
उनले बनाएका झोला हातमा परेपछि मान्छे अचम्म मान्दै भन्छन्– ‘बोराको झोला! यस्तो राम्रो पो हुँदो रहेछ है! क्या कुल।’
‘गत वर्ष हामीले करिब ३ हजार झोला उत्पादन गर्यौं, धेरैजसो विदेश नै निर्यात भए,’ प्रकृतिले भनिन्, ‘विदेशी बजार राम्रो छ, उताका नागरिक वातावरणसँग सचेत पनि छन्।’
‘हामीले एउटा झोला मात्र बेच्ने होइन, झोलासँगै सकारात्मक कथा, सचेतना प्रवाह गरिरहेका हुन्छौं,’ उनी भन्छिन्, ‘पर्यावरण संरक्षणमा टेवा पुर्‍याइरहेका छौं, रोजगारी सिर्जना गरेर महिला सशसक्तीकरणको प्रयास पनि गरिरहेका छौं।’
‘तपाईंले एउटा झोला किन्दा एक जना महिलाले रोजगार पाउँछिन्, उनको आर्थिक हैसियत बलियो बन्छ, रोग लाग्दा उपचार पाउँछन्, उनको बच्चाले राम्रो स्कुल पढ्न पाउँछ, पेटभरी खान पाउँछ भने, एउटा झोला किन नकिन्ने,’ उनी थप्छिन्।
‘नाम त याद भएन तर उहाँले झोलाको खुबै तारिफ गर्नुभयो। ‘हामीले प्याकिङमा मात्र काम लाग्ने हिसाबले बनायौं भनेको यति राम्रो झोला बन्ने रहेछ’ भन्नुभयो,’ प्रकृतिले सुनाइन्।
‘हामी तीन बहिनी मात्रै हौं, ममीले धेरै कुरा सुन्नुपर्यो। तर उहाँ आँटिलो हुनुहुन्थ्यो, केहीमा ध्यान नदिई काममा लागिरहनुभयो। आमाको गुण ममा छ कि जस्तो लाग्छ,’ उनी फुरूंग हुन्छिन्।
आमाको प्रेरणासँगै औपचारिक पढाइले थप आँट दियो। यश कलेजमा एमबिए विद्यार्थी भइरहँदा उनलाई ‘तिमी अवसर सिर्जना गर्ने मानिस हौ, जागिर खाने होइन’ भनेर बारम्बार सिकाइयो। कमसेकम आफ्ना लागि मात्र भए पनि अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने लागिरहन्थ्यो प्रकृतिलाई।
‘हाम्रा अधिकांश दिदीबहिनीले सिलाइबुनाइ जानेकै हुन्छन्। तर त्यो सीप प्रयोगमा आएको पाइएन,’ उनले भनिन्, ‘म केही नयाँ गर्न चाहन्थेँ, खोज्दै जाँदा कम्बोडियामा पनि बोराको झोला बनाइने थाहा पाएँ।’
प्रकृति अनुभव सुनाउँदै भन्छिन्, ‘तटस्थ भएर सोच्यौं भने नयाँ विचार नजन्मिन पनि सक्छ। काम फत्ते पार्ने हिसाबले सोच्यौं भने कुनै न कुनै विचार वा समाधान पक्का निस्कन्छ। यस्तै समाधान यी झोला हुन्।’
‘पाँच वर्षअघि अवसर सिर्जना गर्ने जुन निर्णय गरेँ, त्यो जीवनकै सर्वश्रेष्ठ निर्णय रहेछ,’ कम्पनी स्थापना गर्दाको क्षण सम्झँदै उनले भनिन्, ‘अहिले फर्केर हेर्दा महिलालाई खाँचो भनेको अवसर नै रहेछ भन्ने बुझेकी छु।’
भन्छिन्, ‘अवसर र काम गर्ने वातावरण भए कुनै महिला कमजोर हुनुपर्दैन, हिंसामा पर्नुपर्दैन। हिंसा र पारिवारिक अर्थराजनीति एकअर्कामा जेलिएका छन्।’
यस्तै समस्या कम गर्ने उद्देश्यले दुर्गम र ग्रामिण भेगका महिला एकत्रित गरी उद्यमशीलतासँग जोड्ने प्रयास उनी गर्दै छन्। हालैमात्र ‘वाइज’ नामक स्टोर सञ्चालनमा ल्याएकी छिन्।
‘महिलाहरूले केही न केही उत्पादन गरिरहेका छन् तर त्यसको राम्रो बजार छैन, चुनौती छ। यहाँबाट हामी सामूहिक बजार खोजिरहेका छौं,’ वाइजबारे बताउँदै उनले भनिन्, ‘यहाँ भेला भएर घरेलु उद्यमी महिलाका कथा सुन्छौं। क्षमता विकास र गुणस्तर मापनमा सरसल्लाह गर्छौं।’
उनको प्रयासमा ‘ओमाना बिएन्डबि’ होमस्टे पनि सञ्चालित छ। यहाँ पनि प्रकृतिले अवसरबाट टाढिएका महिलालाई जोड्ने कोशिस गरेकी छिन्।
‘यहाँ काम गर्ने सबै महिला नै हुन्,’ उनले भनिन्।